Qeybaha Auto Soosaaraha / Qaybaha Mashiinka Gawaarida ee Iirbijiyaha | 1D atomaatiga
Bastoolad iyo farriin
Xirmooyinka ugu fiican
Saliidda mashiinka gawaarida
Adeeg tayo sare leh, sare
Waxaan diirada saareynaa cilmi baarista& Samee moodellada Japan ee bistoolada,
Giraanta bistoolada, liner, gaskale, gasket, gasket-ka buuxa, mashiinka mashiinka,
saliida mashiinka, qulqulka dhalaalaya iyo tuubooyinka dhalaalaya.
Hay'adda 1D ee Hay'adda Austa oo ku taal Koonfurta Shiinaha Guang Zhou City, waxaa laga helay sanadkii 2010 khibrad u sameynta khibradda qaybo ka mid ah, iyo gaaska ganacsiga, tuubooyinka mashiinka, saliida dhalaalaysa iwm.
Waxaan ku faraxsanahay inaan nahay saddexda bastoolad-saliida Shiinaha isla markaana ay siddooyinku soo saareen wax soo saare oo ay wadajirayaan Toyota, Mitsubishi iyo silsiladda sahayda ee IM.
1D faa iidada istaraatiijiyada istiraatiijiyadeed ee diiradda saar hoosta:
1. Daraasad adag& Farsamo horumarineed: Isku habeyn in kabadan 1600 oo moodal matoor ah iyo 32 khad wax soo saarka, awoodda wax soo saarka maalinlaha ah 40,000 Piston Piston giraanta bistoomka PCS.
2. Xarunta& Shahaadooyinka
3. Xamuulka xamuulka saadka& Kayd ku filan: Dhis salka warshadaha ee ku filan ee koonfurta Shiinaha Guangzhou City si deg deg looga qabto macluumaadka suuqa iyo baahida macaamiisha.
4. ku jiheynta suuqa& Adeegga Macaamiisha: Fur dukaan toos ah iyo xafiis ganacsi, macaamiisha ku dhammaystirta "caawimaad kasta oo yar" adeegga ka dib iibka.
Qaybaha 1D ee gawaarida waa soo saaraha gawaarida ee diirada saaraya qaybaha gawaarida.
Tayada ugu wanaagsan ee tayada ugu wanaagsan ee saaraya tayada tayada leh ee tayada leh
1d warshadda ugu wanaagsan ee tayada ugu wanaagsan, xarunta& Shahaadooyinka: mashiinnada saliida ee ku qalabaysan ee 'Bosch'
Warshadda tayada leh ee ugu fiican
1d jumlo oo keliya oo lagu kaydiyo qiimo wanaagsan - 1d, tikniyoolajiyadda NPR-ka ee Japan NPR iyo 170 ayaa u qalma farsamayaqaanno tababbaran, isku-darka CCIP, ISLO / TSL6949-2002, ISO-2015 ayaa oggolaaday EC--2015, EC-2015.1d other tayada tayada ugu fiican, xamuulka xamuulka xamuulka& kaydka ku filan
Qalabka dhalaalaya ee tayo sare leh oo casaan ah - 1d otomaatig ah oo co ah co., Ltd.
1d oo ah luuqad dhalaalaya oo tayo sare leh - 1d otomaatiga co., Ltd.
Warshadda ugu fiican ee tayada ugu fiican
1d ee tayada ugu fiican ee tayada ugu fiican ee loo yaqaan 'Gaset', xarunta& Shahaadooyinka: mashiinnada saliida ee ku qalabaysan ee 'Bosch'
Warshadda taranka tayada leh ee ugu wanaagsan
1d warshadda tayada tayada ee ugu wanaagsan, xarunta& Shahaadooyinka: mashiinnada saliida ee ku qalabaysan ee 'Bosch'
Qiimaha warshadda ugu fiican - 1d
1D qiimaha bastooladda ugu fiican - 1d, xarunta& Shahaadooyinka: mashiinnada saliida ee ku qalabaysan ee 'Bosch'
Qaybaha qaybo ka mid ah oo ah qayb ka mid ah soosaaraha qeybaha mashiinka gawaarida in ka badan 11 sano.
si weyn ayaa lagula talinayaa.
Farsamaynta Piston Menu wuxuu wacayaa soo-saareyaasha
1. Toyota, Honda, Suzuki, Dafa iyo Nissan matoorada shidaal ay qaataan giraanta steel qayilo ugu horeysay ee casaan ah, dahaadhay dibadda chrome goobada, waxaaga labaad, qaab NPR ruxruxo weyn ama Rik wavelet qaab isku daro giraanta saliid, naxaas ah ama madow, giraanta kasta waxaa lagu buufiyaa la code midabka (red, jaalle ah oo buluug ah) iyo nooca T ama n, giraanta kasta waxaa lagu buufiyay code midabka (casaan, huruud ah iyo buluug)2. Mitsubishi, Nissan, Toyota, matoorada naaftada ay qaataan qayilo ugu horeysay ee casaan ah, dibadda goobada dahaadhay chrome, line dhalaalaya dhexe, bir ductile labaad, dahaadhay chrome dibadda ah, line xagal gabogabaysmo, giraanta saliid saddexaad, nitriding godka giraanta taageero loogu aarayo yar; Mid kasta oo code midabka giraanta buufiyo (red, jaalle ah iyo buluug)3. Laanguruusalada engine naaftada wuxuu qaadanayaa habka asalka ah, dhinaca saddex dahaadhay ama dhinac afar dahaadhay, daaweyn dusha ee giraanta saliid iyo giraanta saliid dalool weyn, iyo habka polytetrafluoroethylene for guga. Nooca T ama N, mid kasta oo code midabka buufiyo giraanta (casaan, huruud ah iyo buluug)
Shirkadda Gaaska ee ugu Fiican
Best qeybiye goomahooda buuxa.imtixaanka ee alaabta si joogto ah la sameeyay si loo hubiyo tayada sare.
Xirfadlaha Xirfadlaha Xirfadaha
saarayaasha fur dhimbiil Professional.Kor u qaadidda adeegga ee loo fududeeyo doonaa horumar ah ee image brand.
Bixiyeyaal tayo sare leh oo ah alaab-qeybiyeyaal
Doorka gasket waa wax xadeya, waa sheyga xirxiran ee soo dhexaadka ah ee udhaxeeya dhul-beereedka iyo madaxa dhululubo, oo loo adeegsaday ka hortagga gaaska cadaadiska sare, saliidaha saliidaha iyo si aad u qaboojinayso.1D atomaatigga atomaatiga co., Ltd. Gawaarida tayada sare ee tayada sare - 1d auto qaybo ka mid ah co., Ltd.
Intro oo adeegsata suufka 1D ee qaybaha atomaatiga ah ee co., Ltd.
Liishadda dhululubo waa qayb dhululubo ah, oo lagu meeleeyay godka dhululubada ee jirka, oo ay ku hagaajiyeen madaxa dhululubada. Biistooku wuxuu sameeyaa inuu ka takhaluso dhaqdhaqaaqa godkeeda gudaha iyo biyo qaboojinta ayaa laga bixiyaa banaanka. Shaqada dhululubada dhululubo waa:1. Booska dhululubo ee dhululubo waxaa lagu sameeyaa iyada oo ay ku jiraan madaxa dhululubo iyo bastoolad.2. Qulqulka dhululubo ee dhululubooyinka ee mashiinka 'Cyrindrical Piston' oo ah matoor Piston ayaa ku tiirsanaaday oo uu horseedaa hormuud u ah isu soo horjeedka dhaqdhaqaaqa bistoolada.3. Ku wareeji kuleylka golaha bastoolada iyo lafteeda biyaha qaboojinta si ay uga dhigtaan inay ka shaqeeyaan heerkulka ku habboon.4. Gacabka dhululubo1D atomaatigga atomaatiga co., Ltd. Intro oo adeegsata suufka 1D ee qaybaha atomaatiga ah ee co., Ltd.
Tilmaanta 4D33 Piston Mitsubishi ah alaab-qeybiye
Alfin Fuso Gawaarida Mitsubishi 4d33 Diesel Mashiinka Qaybta Mashiinka Diesel Piston 108mm Me013312 Me016896Waxaan raacnaa Mabda '1D: wax soo saar tayo sare leh, macaamil marka hore. Badeecadeena ayaa ku jira tikniyoolajiyadda Japan iyo Taiwan asalka.4D33 waa mid ka mid ah moodooyinka ugu musaafuriga ah. Tayada badeecadeena waxaa aqoonsan macaamiil badan. Annagu ma nihin wax ugu fiican, laakiin waxaan bixinaa sida saxda ah ee aad u baahan tahay.Ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto oo aad bilowdo iskaashigeenna koowaad.1D atomaatigga atomaatiga co., Ltd. Tilmaanta 4D33 Piston Mitsubishi ah alaab-qeybiye
Xirfadlaha mashiinka mashiinka
Vall Valve1D atomaatigga atomaatiga co., Ltd. Xirfadlaha mashiinka mashiinka
Haddii aadan ka heli karin wax soo saar shelf-shelf ah oo ku habboon mashruuca, ha u oggolaado Adeegga Aqoonsiga Xirfadda ee Xannaanada ee Aloofyada ah inay kaa caawiyaan inaad hesho alaabtaada kugu habboon 7 maalmood adiga oo aan allabari u dhigin waqti-aad u-suuq-geyn ama hanaan. Si sax ah wax soo saarka: Adeegsiga gobolka tikniyoolajiyadda farshaxanka ee loo habeeyo oo la soo saaro badeecooyinka ayaa hubiya in macaamiisha ay helaan alaabada ugu saxsan ee la heli karo.
1. Baadhitaan: Macaamiisha waxay u sheegaan qodobka foomka la doonayo, faahfaahinta waxqabadka, wareegga nolosha, iyo shuruudaha u hoggaansanaanta.
2. Naqshadeynta: Kooxda naqshadeynta ayaa ku lug leh bilowga mashruuc si loo hubiyo in badeecadaha ugu wanaagsan ee loo habeeyay baahiyaha macaamiisha ku habboon.
Shayga kaalin muhiim ah in tiro balaadhan oo ah codsiyada in industry ee.
Daminta si dhakhso ah, nolol dheer oo dherer ah ilaa 120,000 kiiloomitir
Gasket buuxa.Iska caabin adag, cadaadis, kuleyl iyo iska caabbinta dhirta1D atomaatigga atomaatiga co., Ltd. Warshadda ugu fiican ee tayada ugu fiican
Wax su'aalo ah, Pls noo soo qor